အဆိုးလေးရဲ့ရင်ခုန်သံ – Grab Love Story
သမီးနံမည်က ငယ်ငယ်ပါ. ရန်ကင်းမှာ နေပါတယ်. သမီးက တစ်ဦးတည်းသော သမီးပါ. ဒါကြောင့်မို့ သမီးက သူငယ်ချင်းတွေကို အင်မတန်ခင်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပေါင်းတက်ပါတယ်.. သမီးရဲ့ အပျိစင်ဘ၀ဟာလဲ သူငယ်ချင်းကို ခင်မိလို့ ဆုံးခဲ့ရတာပါ… ဖြစ်ပုံလေးကတော့… သမီးအသက် ၁၄ နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတော့ သမီးရဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဟာ ၈ တန်းကျောင်းသူနဲ့ မလိုက်အောင် ဖွင့်ထားလာခဲ့ပါတယ်. ကျောင်းကကောင်လေးတွေ သမီးရဲ့ ကိုယ်လုံကိုယ်ပေါက်အကြောင်း လိုက်လိုက်စကြလို့ ငိုရတာလဲ အမောပါဘဲ. တစ်ခါတလေ ကျောင်းတောင် မသွားချင်ပါဘူး. အတန်းထဲမှာ ဆရာမက စာထဆိုခိုင်းတဲ့ အချိန်ဟာ သမီးအတွက် ငရဲပါဘဲ.. နောက်ကကောင်လေးတွေက ကျမရဲ့ ဖင်လေးကို ဝါးစားမတက် ကြည့်ကြတဲ့ သူက တမျိုး.. သားရေကွင်းနဲ့ လှမ်းပြစ်တဲ့ သူကတမျိုး နဲ့ စာတောင် ကောင်းကောင်း မဆိုနိုင်ပါဘူး.. ဆရာမ ရိပ်မိသွားပြီး ၀င်တားမှသာ သက်သာရာ ၇တာပါ… တနေ့တော့ သမီးတို့ဘေးခြံကို လူသစ်တွေ ပြောင်းလာကြပါတယ်. သမီးနဲ့ ရွယ်တူ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ပါလာတာမြင်လို့ အရမ်းကို ပျော်သွားခဲ့မိတယ်လေ.. သမီးက အဖေါ်ခင်တက်တယ် မဟုတ်လား.. ဒယ်ဒီနဲ့ မာမီ အလုပ်သွားရင် သမီးကျောင်းဆင်းလို့ အိမ်ရောက်တာနဲ့ အိမ်ကအဒေါ်ကြီးနဲ့ သမီးနဲ့ ၂ ယောက်ဘဲ အိမ်မှာရှိတာ.. အခုတော့ အဖေါ်ရပြီလို တွေးပြီပျော်နေတာပေါ့. နောက်နေ့ကျောင်းရောက်တော့ ဆရာမက ကျောင်းသူအသစ်နဲ့ တစ်တန်းလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး သမီးရဲ့ ခုံမှာ နေရာချပေးထားလိုက်ပါတယ်..။
အဲဒီကစလို့ သမီးတို့ နှစ်ယောက် စကားတွေ ရေပတ်မ၀င်အောင် ပြောရင်းနဲ့ဘဲ ခင်မင်သွားကြပါတော့တယ်.. သူ့နာမည်က မီးမီး (အိမ်နာမည်) တဲ့.. သူ့အဖေက နယ်မကြာခဏထွက်ရကြောင်း.. သူ့အမေဆရာဝန်မကြီးက ဆေးရုံနဲ့ ဆေးခန်းတွေမှာဘဲ အချိန်ကုန်တက်ကြောင်း. စသည်ဖြင့် သိလိုက်ရပါတယ်. ကျောင်းဆင်းတော့ သမီးက ကျောင်းကားရှိရာကို လျှောက်မလို့ ခြေလှမ်းလိုက်တုန်းမှာဘဲ မီးမီးက သမီးကို လှမ်းဆွဲရင်း. “ငယ်ငယ် ဘယ်လဲ.. ဖေဖေ လာကြိုမှာ မီးမီးနဲ့ အတူတူပြန်လေ. အိမ်ချင်းကပ်ရပ်ဘဲဟာ.” လို့ပြောနေတုန်း မီးမီးတို့ကားလေး အနားရောက်လာပါတယ်. ကားပေါ်ရောက်တော့ မီးမီးအကို နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတော့ အေး. သမီးတို့ ညီအမတွေလို ရင်းရင်းနှီးနှီးနေကြတဲ့.. ဒီလိုနဲ့ ပထမ အစမ်းစာမေးပွဲတွေပြီးလို့ ကျောင်းပိတ်ထားတုန်း မီးမီးက ရေကူးသင်ဖို့ အဖေါ်လာစပ်ပါတယ်.. ကျမလဲ ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ကိုယ်ဟန်ပြရတာမျိုး မလုပ်ချင်တာနဲ့ “မီးမီးရယ်. ရေကူးတာ အသားမဲတယ်ဟဲ့. နင်က ဘယ်မှာ သင်မှာလဲ ငါတော့ မသင်ချင်ပါဘူးဟာ” “အေးပေါ့ ငယ်ငယ်ရယ်. နင်က ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လှပြီးသားဆိုတော့ မလိုပေမယ့် ငါ့အတွက်တော့ လိုသေးတယ်လေ.. လာပါဟာ.. င့ါအဖေကိုယ်တိုင် သင်ပေးမှာ.. ရေကူးကန်မှာတင်ဘဲလေ.” “အေးပါ မီးမီးရယ်.. နင်အဖေါ်မရှိရင်လဲ လိုက်သင်တာပေါ့” ဒီလိုနဲ့ နောက်နေမှာတော့ မီးမီးရယ်. သူ့အဖေရယ့် သမီးကို ခေါ်ပြီးရေကူးကန်သွားကြပါတယ်.. မီးမီးအဖေက လူကြီးဆန်ပြီး သလေးတွေအပေါ်လဲ ချစ်တက်ပါတယ်.. “ကဲ. သမီးတို့ ရောက်ပြီ . ဆင်းကြ.. အင်္ကျီသွာလဲချေ.. အဖေလဲ လဲပြီးဆင်းလာခဲမယ်.” လို့ပြောပြီး အ၀တ်လဲခန်းထဲ ၀င်သွားပါတော့တယ်.. ရေကူးကန်ထဲရောက်တော့ ဦးက မီးမီးကို ရေကူးစသင်ပေးပါတယ်.. မီးမီးရဲ့ ခါးလည်က ကိုင်ပြီး ပတ်လက်ကူးနည်းသင်တာပါ. ရေထဲမှာ ပတ်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့ မီးမီးကို လှမ်းကြ့ည်မိတော့ မီးမီးရဲ့ နို့လေးတွေဟာ. ရေကူးအကျီင်္အောက်မှာ ပြားကပ်ကပ်နဲ့ ကြည့်လို့ မကောင်းပါဘူး. ဒါနဲ့ သမီးရဲ့ အင်္ကျင်္ီအောက်က ဖွင့်ထွားနေတဲ့ နို့လေးတွေကို အသာစမ်းကြည့်မိလိုက်ပါတယ်.. နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့ကို ဒီနေ့မှာဘဲ သေသေချာချာခံစားလိုက်ရတာ.. အရင်နေ့တွေ ရေချိုးရင်း ပွတ်မိတာထက် အများကြီးသာပါတယ်.. ဒါကိုဘဲ မီးမီးအဖေက တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့သားပါတော့တယ်.. သမီးလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ လက်၂ဖက်ကို ပေါင်ကြားထဲထည့်လိုက်တော့မှ သမီးရဲ့ နိုးလေး ၂ လုံးဟာ လက်မောင်း ၂ ဖက်နဲ့ ညှစ်လိုက်သလိုဖြစ်ပြီး အရှေ့ကို ပြူးထွက်လာပါတော့တယ်. သမီးလေ. ရှက်လိုက်တာ. မျက်နှာတောင် ဘယ်နားဖွတ်ထားရမှန်းမသိဘူး.. အဲဒီအချိန်မှာဘဲ မီးမီးရဲ့ ဖုန်းလာတာနဲ့ သမီးကောက်ကိုင်ဖြေပေးလိုက်တော့ မီးမီးရဲ့ အမေဖြစ်နေပါတယ်. ‘မီးမီးလား.. မေမေပါ. ရေထဲ အကြာကြီး မနေနဲ့နော်.’ “မီးမီး မဟုတ်ပါဘူး. အန်တီ. သမီးငယ်ငယ်ပါ. ခဏကိုင်ထားပါဦးနော်” လို့ပြောပြီး မီးမီးကို ခေါ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. “မီးမီးရေကူးကန်ထဲက တက်လာချိန်မှာတော့ ဦးဦးက သမီးကို လက်ယပ်ပြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့ သမီးလဲ ရေထဲ ဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်.. ရေထဲရောက်တော့ ဦးဦးက သမီးလက်မောင်းက ကိုင်ပြီး ပတ်လက်ဖြစ်သွားအောင် အသာ ဆွဲလှန်လိုက်ပါတယ်. သမီးရဲ့ ကြောပြင်ဟာ ဦးဦးရဲ့ လက်ဖျံပေါ်မှာ ရောက်နေပြီး ဦးဦးရဲ့ ညာဖက်လက်ဖဝါးကြီးကတော့ သမီးရဲ့ တင်ပါး အိအိစက်စက်ကြီးကို အားရပါးရ ကိုင်ထားပါတော့တယ်..။
သမီးလဲ လန့်သွားပြီး ဦးဦးကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ဦးဦးမှာ ဘာခံစားချက်မှ ရှိပုံမရပါဘူး. “ကဲ သမိး လက်၂ဖက်ကို ကားထား. ခြေထောက် ၂ချောင်းကို မှန်မှန်ခပ်” သမီးလဲ ဦဦးခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လိုက်လုပ်မိပါတယ်. အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ဦးဦးရဲ့ ဘယ်ဖက်လက်ချောင်းလေးတွေဟာ သမီးရဲ့ နို့အုံအစပ်ကို လာပွတ်ပေးနေသလို ညာဖက်လက်ခလယ်ကလဲ သမီးရဲ့ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက်ကို ရေးကူးအကျီင်္ပေါ်ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်ပေးနေပါတယ်. ပထမတော့ သမီးလဲ တော်တော်လန့်သွားပြီ အော်မိတော့ မလိုတောင်ဖြစ်သွားမိပါသေးတယ်.. နောက်တော့ ဖုန်းပြောနေတဲ့ မီးမီးကြားသွားရင် ဦးဦးရှက်သွားမှာ စိုးတာနဲ့ ငြိမ်နေလိုက်မိပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ၂ မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ သမီးရဲ့ ရှက်စိတ်တွေဟာ ဦးဦးရဲ့ ကျွမ်းကျင်လှတဲ့ လက်ဖဝါးတွေရဲ့ အထိအတွေ့အောက်မှာ ပြိုလဲခဲ့ရပါတော့တယ်… သမီးလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ မျက်စိစုံမှတ်ပြီး လက်တွေကို အတင်းလှုပ်နေမိပေမယ့် ဦးဦးရဲ့ လက်ကြီး လွတ်သွားမှာကို စိုးလို့ ပေါင်နှစ်လုံးနဲ့ ညှပ်ထားမိပါတယ်… ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ မီးမီးဖုန်းပြောတာပြီးလို့ ရေထဲဆင်းလာမှဘဲ ဦးဦးလက်တွေ ရပ်သွားပါတော့တယ်.. “သမီးဆင်းတော့. အိမ်ပြန်ကြရအောင်. နေလဲပူပြီ. ထမင်းစားချိန်လဲရောက်ပြီ..” လို့ ဦးဦးပြောမှဘဲ သမီလဲ မဆင်းချင် ဆင်းချင်နဲ့ ဆင်းလိုက်ရပါတယ်… သမီးရဲ့ ပထမဆုံး ကာမခံစားမှုဟာ မထင်မှတ်တဲ့နေရာ. မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းအဖေနဲ့ သူငယ်ချင်းရှေ့မှာတင်ဖြစ်ခဲ့၇တာပါ. သမီးအတွက်တော့ ရင်ခုံစရာ မဟာ စွန့်စားခန်းကြီးပါဘဲ. သမီးလဲ မီးမီးတို့ အိမ်မှာ နေ့လည်စာ စားဖို့ လိုက်သွားမိပါတယ်. ကားပေါ်မှာ ဦးဦးကို ခိုးကြည့်မိတော့ ခုဏက ဘာမှ ဖြစ်မထားသလိုပါဘဲ.သမီးကသာ ရင်တွေခုံနေပေမယ့် ဦးဦးကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါဘဲ. နေနိုင်မှာပေါ့ ဦးဦးက မိန်းမတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဘူးလဲမှ မသိတာလေ… ဒီကတော့ရင်တွေ ခုံလိုက်ရတာ အရမ်းပါဘဲ.. တွေးကြည့်ရင်း သမိးသ၀န်တွေ တိုလာမိပါတယ်.. ထမင်းစားပြီးတော့ မီးမီးက ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ပြောတာနဲ့ အည့်ခန်းမှာ အတူထိုင်ကြည့်ဖြစ်ကြပါရော… ဇာတ်လမ်းက တ၀တ်မရောက်သေးဘူး မီးမီးကော သမီးပါ ရေကူးထားတဲ့ အချိန်နဲ့ ပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားကြပါတော့တယ်.. “သမီးစိတ်ထဲမှာ သမီရဲ့ အဖုတ်လေးဆီက အရည်နွေးနွေးလေးတွေ ထွက်နေတယ်လို့ ခံစားနေရပြီး အိပ်မပျော်တပျော်လိုဖြစ်လာရာက မျက်စိကို ဖွင့်ကြည့်မကြည့်မိဘဲ ဆက်အိပ်နေလိုက်မိပါတယ်. အဲဒီအချိန်မျာဘဲ သမီးရဲ့ စကပ်လေးအောက်က အောက်ခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ အဖုတ်ကလေးကို တယောက်ယောက်က ဖွဖွလေး လာပွတ်ပေးနေသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်.. ။
သမိးရဲ့ ပေါင်၂ချောင်းကြားက လာပွတ်ပေးနေတဲ့ လက်ကြီကို ရပ်မသွားစေချင်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် သမီးရဲ့ အဖုတ်လေးဆီက စီးကျလာတဲ့ အရည်တွေ များလာတော့ သမီးလဲကြောက်ကြီး တဖက်ကိုစောင်းအိပ်လိုက်တာ… လာပွတ်ပေးနေတဲ့ လက်ကြီးလဲ ပြန်ရုပ်သွားပါတယ်… ခနနေတော့ သမီးလဲ အိပ်နေရာက ထကာ အိမ်သာထဲကို ၀င်ပြီး သမီးရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းကလေးကို စမ်းကြည့်မိပါတယ်.. . အကွဲကြောင်းလေးတစ်ခုလုံးတင်မက ပေါင်ခွကြားနေရာက ဘောင်းဘီလေးလဲ စိုရွဲနေတာပါဘဲရှင်… သမီးလဲ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို စမ်းရတာ အားမရတော့တာနဲ့ အရဲစွန့်ပြီး ထိုးထည့်ကြည့်မိပါတယ်… လက်ညိုးလေးတထစ်ပြီး တထစ်ဝင်သွားတဲ့ ဖီလင်ဟာ ပြောတောင်မပြတက်ပါဘူး.. သမီးလဲ ကောင်းကောင်းနဲ့ လက်ညိုးအဆုံးအထိ ဆက်ထည့်နေမိပါတယ်… ဒါပေမယ့် သမီးလိုချင်တဲ့ အထဲထိတော့ ရောက်ဟန်မတူပါဘူး… အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာတာနဲ့ သမီးရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲရောက်နေတဲ့ လက်ညိုးကို မွေပြစ်လိုက်မိပါတယ်… မှိတ်ထားတဲ့ သမီးရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာတော့ ဦးဦးရဲ့ ရုပ်ပုံကိုဘဲ မြင်နေပြီး ရေကူးကန်ထဲမှာ ဦးဦးပေးခဲ့တဲ့ အထိအတွေ့တွေကိုပဲ တမ်းတနေမိပါတော့တယ်.. —– သမီးလဲ အဲဒီအချိန်ကစပြီး မီးမီးတို့ အိမ်ဖက်ကို ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါတယ်… ဒါပေမယ့် တပတ်လောက် အကြာမှာတော့ သမီးဆက်ပြီး ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်… “မီးမီးရေ. ဘာတွေလုပ်နေလဲဟေ့. ငါလဲပါမယ်လေ.” လို့ပြောရင်း မီးမီးတို့ အိမ်ထဲ ၀င်ခဲ့မိပါတယ်.. “အေး ငယ်ငယ် လာ.. ငါလဲပျင်းနေတာနဲ့ အတော်ဘဲ. နင်ကလဲ ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ ဟာ..” “ငါလဲ မအားလို့ပါ မီးမီးရယ်. ဒါနဲ့ ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူးလား..” “မရှိဘူးဟ. ဖေဖေက နယ်ပြန်သွားတာ. ၂ ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်… မေမေကလဲ ဆေးရုံမှာ.. အိမ်မှာ ငါတယောက်ထဲရယ်. ဟဲဟဲ” “ဘာလဲဟ နင့် ဟဲဟဲ ကြီးက.” လို့ပြောလိုက်ပေမယ့် ဦးဦးမရှိဘူး ဆိုတဲ့ အသိဟာ သမီးရဲ့ ရင်ကို ဟာတာတာဖြစ်သွာစေပါတယ်.. “နင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောဘူးလို့ ကတိပေးရင် ပြောပြမယ်” “အေးပါဟယ်. ပြောမှာသာ ပြောစမ်းပါ.” “နင်မလာတာနဲ့ င်လဲပျင်းလို့ မေမေ့ စာအုပ်စင်ဝင်မွှေရင်း စာအုပ်ကောင်းတွေ ရထားတယ်ဟ” “ဘာစာအုပ်တွေလဲဟ. အန်တီ့ဆီမှာ ဆေးစာအုပ်တွေဘဲ ရှိမှာပေါ့” “အေး ဟုတ်တယ်. ဒါပေမယ့် ဟိုပုံတွေ ပါတယ်ဟ” “ဘာပုံတွေလဲ ငါ့ကိုလဲ ပြဦးလေဟာ” “ပြမှာပေါ့ဟယ်. ရောကြည့်” ဆိုပြီး ပေါင်အောက်ဖွတ်ထားတဲ့ သူ့အမေရဲ့ ဆေးဖတ်စာအုပ်ကို ထုတ်ပြပါတယ်.. သမီးလဲ ဘာမှန်း မသိဘဲ ယူကြည့်လိုက်မိပြီးတော့မှ လီးပုံတွေ.. အဖုတ်ပုံတွေကို စာတန်းတွေထိုးပြီး ရှင်းပြထားတာပါ… သမီးလဲ အံ့အားသင်ြ့ပီး တခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ လီးပုံတွေကို မျက်တောင် မခတ်တမ်း ကြည့်နေမိပါတော့တယ်… “ဟဲ့ ငယ်ငယ် အသက်လေးဘာလေး ရူအုံးလေ” လို့ မီးမီးပြောမှ သတိပြန်ဝင်လာပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ “ရော့ ရော့ နင့်စာအုပ် ဘာတွေမှန်းလဲ မသိဘူး. မီးမီးနော် ငါ့တို့ ငယ်ငယ်လေးတွေ ရှိသေးတာ. နင်ဒါတွေ စိတ်ကူးနေပြီးလား.” လို့ပြောပြီး စားအုပ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်.. “ယောင်းမရယ်… ရှက်နေပြန်ပြိ.. ငါက နင့်ကို ခင်လို့ စတာပါဟာ. နင့်နို့ကြီးတော့ ကိုင်ကြည့်ချင်တယ်ဟာ။
လှလွန်းလို့ပါ… လို့ပြောရင်း သမီးနို့ကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်.. “မဟုတ်တာ မီးမီးရယ်.” လို့ ပြောရင်း. သမိးရဲ့ ဖွံ့ထားလှတဲ့ရင်နှစ်မွာကို လက်နဲ့ ကာထားလိုက်မိပါတယ်.. စိတ်ထဲမှာတော့…. မီးမီးရယ်.. ငါက နင့်ယောင်မ မဟုတ်ဘူး… နင့်အမေဖြစ်ချင်တာ.. ငါ့နို့ကိုလာကိုင်တဲ့ နင့်လက်တွေဟာ နင့်အဖေဖ လက်တွေသာဆို သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့တွေးရင်း ၀မ်းနဲလာတာနဲ့ သမီးလဲ မီးမီးကို နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ မိပါတော့တယ်… အိမ်ရောက်တော့ အိမ်ခန်းထဲ တန်းဝင်သွားပြီ အိပ်ယာပေါ်မျာ ဦးဦးပေးခဲ့တဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ပြန်တမ်းတ မိလိုက်တာနဲ့ သမီးရဲ့ အဖုတ်အသစ်စက်စက်လေးဆီက အရည်ကြည်လေးတွေ တစိမ့်စိမ့် စီးကြလာပါတော့တယ်… သမီးလဲ အဖုတ်ထဲ လက်ထည့်တဲ့ အရသာသိပြီးသားဆိုတော့ လက်ညိုးလေးဟာ အလိုလိုဘဲ အဖုတ်လေးထဲကို ၀င်ရောက်သွားပါတေ့ာတယ်… သမီးလဲ အဆုံးထိထည့်ပြီး ထိုးထိုးမွေတာပါဘဲရှင်… သမိးအားမရဖြစ်လာတာနဲ့ လက်ခလယ်ပျောင်းထည့်ကြည့်လိုက်တာ…. စိတ်ကြေနပ်လောက်တဲ့အထိမဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်လေး အစဉ်ပြေသွားပါတယ်… နောက်တော့ အဖုတ်နှုပ်ခမ်းသားလေး ၂ ခုဆုံးသွားတဲ့နေရာထိပ်က အစေ့လေးကလဲ အရမ်းတင်းတာတာနဲ့ လက်မနဲ့ ဖိဖိပွတ်နေမိပါတယ်… လက်ခလယ်ကို ၀လုံးဝိုင်း ဝိုင်းရင်း. သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်လုပ်နေမိပါတော့တယ်… အားနေတဲ့ လက်တဖက်ကိုလဲ အအားမပေးဘဲ နေ့လည့်က မီးမီးကိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ နို့လေးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အားရပါးရ ကြိတ်ချေနေမိတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာသွားမှန်း မသိတော့ပါဘူးရှင်… အိမ်ကအဒေါ်ကြီး ညစာထမင်းလာစားဖို့ တခါးလာခေါက်တော့မှဘဲ မရပ်ချင် ရပ်ချင်နဲ့ ရပ်လိုက်ရပါတယ်.. အိပ်ယာပေါ်မှာတေ့ သမီးရဲ့ အဖုတ်ကလေးက ထွက်လာတဲ့ အချစ်ရည်ကြည်တွေရော… သုတ်ရည်တွေပါ ဟိုတကွက် ဒီတကွက်နဲ့ ဖြစ်နေလို့ ဦးဦးမျက်နှာကြီးကို မြင်ယောင်လာပြီ ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြီး.. “သွား… လူကြီး ဆိုးတယ်.ကွာ.” လို့ တိုးတိုးလေးပြောရင်း ရေချိုးခန်းဆီ ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်.. နောက်တစ်ခေါက် ရေကူးကန်သွားဖို့ သမိးမှာ တော်တော်လေး စေါင့်လိုက်ရပါတယ်.. ဦးဦးက တော်တော်နဲ့ ပြန်မရောက်လာဘူးလေ… ဦးဦးပြန်လာပြီး နောက်ရက်မှာဘဲ ရေကူးကန်သွားကြပါတယ်… ရေကူးကန်မှာ မီးမီးဆီကို ဖုန်လာပါစေလို့ ရင်ထဲ အခါခါဆုတောင်းပေမယ့် ဖုန်းမလာပါဘူး ရှင်.. ဦးဦးမျက်နှာကြည့်ရတာလဲ သိပ်ရွင်ရွင်ပြပြရှိပုံမရဘူး.. တစ်ခုခုကို သေသေချာချာ စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်..။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်ရောက်တော့ ထမင်းစားပြီး ဗီဒီယိုကြည့်ကြပါသေးတယ်… ကြည့်ရင်းနဲ့ တ၀တ်လောက်အရောက်မှာ မီးမီး အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့ သမီးပါ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လောက်ပြီး ဦးဦးလာပွတ်ပေးမှာကို မျှော်လင့်နေမိပါတယ်… ဦးဦးလာပွတ်ရင် လွယ်အောင် အောက်ခံဘောင်းဘီကိုပါ ခွတ်ထားခဲ့တာ ဦးဦးက ဘယ်လို ပွတ်ပေးမလဲ ဆိုတာ အသက်ကို မှန်မှန်မနဲရှုရင်း စိတ်ထဲတွေးနေမိပါတယ်.. သမီးက ဘော်ဒီထွားတယ် ဆိုပေမယ့် အဖုတ်ဘေးမှာ အမွေးမပေါက်သေးပါဘူး.. ဆီခုံတင်းတင်းလေးပေါ်မှာသာ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေတဲ့ စေါက်မွေးကျို့တို့ ကျဲတဲလေးတွေသာ ရှိပါသေးတယ်… သမီးရဲ့ အတွေးမဆုံးခင်မှာဘဲ ဦးဦးဟာ သမီးနားကို ကပ်တိုးလာတာကို မှေးမှေးလေားဖွင့်ထားတဲ့ မျက်လုံးက မြင်လိုက်ရတဲ့ တဲ့အခါမှာတော့ ခြေတွေလက်တွေတောင် အေးလာအောင်ကြောက်မိပါတယ်… ဦးဦးက သမီးစကပ်လေးကို အပေါ်ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲတင်လိုက်တာကို ခံစားလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပူးနေတဲ့ သမီးရဲ့ ပေါင်နှလုံးက အလိုလိုကားသွားမိလို့ သမီးရဲ့ အဖုတ်လေးနဲံ ဆီးခုံလေးကို လေအေးအေးလေးတွေ တိုးမွေ့တိုက်ခတ်သွားတာ ခံစားလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတေ့ာ ဦးဦးရဲ့ ပါးစပ်က အာမေတိတ် အသံတိုးတိုးလေးထွက်လာတာကို ကြားမိလိုက်ပါတယ်… “ဟာ… လှလိုက်တာ.ကွာ…ဖောင်းဖောင်လေးနဲ့ ၀င်းနေတာဘဲ…” သမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ဦးဦးဆီက အသက်ရှုထုတလိုက်တဲ့ ပူနွေးနေတဲ့ ၀င်လေထွက်လေဟာ လာရောက်ရိုက်ခက်နေပါတော့တယ်… သမီးလဲ ဦးဘာလုပ်နေလဲ သိချင်လို့ မျက်လုံးကို မှေးမှေးလေး ပြန်ဖွင့်ကြ့ည်တော့ ဦးဦးလေ… သမီးရဲ့ အဖုတ်နှုပ်ခမ်းလေးတွေကို ဖွဖွလေး ကုန်းနမ်းလိုက်တာ… အို.. သမီးဖြင့် မယုံနိုင်အောင်ဘဲ.. ယောင်္ကျားတွေ အဲလိုလုပ်လိမ့်မယ့်လို့ သမီးမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး.. အထူးသဖြင့် သမီး တိတ်တခိုးချစ်ရတဲ့ ဦးဦးကို မလုပ်စေချင်ပါဘူး… နောက်တစ်ခါ ခိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ သူ့ခေါင်းကြီးက သမီးအဖုတ်လေးပေါ်မှာဘဲ ရှိနေဆဲပါ.. အဲဒီအချိန်မှာတော့သမီးရဲ့ အဖုတ်လေး ၂ ချမ်းကွဲသွားပြီး အထဲကို သူ့လျှာကြီးနဲ့ ယှက်လိုက်တာ….. အို…..အ…. ခံလို့ကောင်းလိုက်တာရှင်… သမီးစိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရတော့ဘဲ စေါက်ရည်ကြည်လေးတွေနဲ့အတူ ညည်းသံတိုးတိုးလေး ကြားလိုက်မိလို့ ထင်ပါရဲ့ သူ့လျှာကြီးနဲ့ ယှက်နေတာကို ခနရပ်လိုက်ပါတယ်… ရပ်လိုက်တယ် ဆိုပေမယ့် လျှာကြီးကတော့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို ကပ်ထားတုန်းပါဘဲ… သမီးလဲ မခံစားနိုင်တော့တဲ့ အဆုံး သမီးရဲ့ ပေါင် ၂ လုံးကို ပိုကားပေးလိုက်မိတဲ့ အခါမှာတော့ သမီးအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေမှန်း ဦးဦး ရိပ်မိသွားပါတော့တယ်..။
“သမီလေး….. ငယ်ငယ်….. နိုးနေပြီလား..” လို့လေသံလေးနဲ့ မေးရှာပါတာနဲ့ သမီးလဲ မျက်စိကို ဖွင့်လိုက်ပြီး ဦးဦးကို ကြည့်က ခေါင်းလေးအသာညိမ့်ပြလိုက်မိပါတယ်… “သမီးရဲ့ အဖုတ်လေးကို နမ်းကြည့်ချင်တာ ကြာလှပြီ. အခုမှဘဲ နမ်းရတော့တယ်… ဦးဦးဆက်နမ်းကို့ ရမလားဟင်” ကြည့်ပါလား.. ဦးဦးလူဆိုး… သူနမ်းပြီးလို့ သမီးမှာ အချစ်ရည်ကြည်တွေနဲ့ ရွဲနေကာမှ….. စနမ်းတဲ့နေရာကလဲ အဖုတ်လေးမှ… အရှက်လဲကုန်ပြီ.. ဒါတောင် ခွင့်လာတောင်းနေသေးတယ်… မုန်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ… သမီးလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ အသာလေး ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်… ဦးဦးရဲ့ မျက်နှာဟာ ချက်ချင်းပြုံးသွားပြီး သူခေါင်းဟာ သမီးရဲ့ နီရဲနေတဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေဆီကို ပြန်ရောက်သွားပါတော့တယ်… သမီးလဲ ဆက်အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်စရာမလိုတော့တာမို့ သမီးရဲ့ ပေါင်တံ ဖြူဖြူလေး ၂ချောင်းကို အစွမ်းကုန် ကားပေးလိုက်မိပါတော့တယ်.. ကောင်းလိုက်တာရှင်.. ဦးဦးယှာနဲ့ ထိလိုက်တဲ့ နေရာတိုင်းက… သမီးရဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို ငြိမ်အောင်ကို ထားလို့ မရတော့တာ… အောက်ကနေပြီး ဦးဦးလျှာကြီး သမီးအဖုတ်လေးထဲ ပိုဝင်လာအောင် ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ကော့ပေးနေမိတော့တာပါဘဲ… ဘာဖြစ်ကုန်လဲ မသိတော့ပါဘူး.. သေချာတာတော့ ဦးဦးလျှာကြီကို မရပ်သွားစေချင်တာပါဘဲ…. ဦးဦးရဲ့ လက်ခလယ်တချောင်းဟာလဲ အချစ်ရည်တွေနဲ့ စိုစွတ်နေတဲ့ သမီးရဲ့ အဖုတ်လေးထဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးဝင်လို့လာနေပါတယ်… သမီးရဲ့ အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေကို ခွဲပြီးဝင်လာတဲ့ ဦးဦးရဲ့ လက်တဆစ်ချင်း. တဆစ်ချင်းတိုင်းမှာ သမီးရင်ခုံသံတွေဟာ ပိုလို့ မြန်လာခဲသလို အားရပါးရ အော်ဟစ်ငြီးငြူဖြစ်လိုက်ချင်လာအောင်ပါဘဲ… ဦးဦးကလဲ ရိပ်မိပုံရပြီး. သမီးကို အသံမထွက်ဘို့ သတိပေးပါတယ်… သမိးရဲ့ အစေ့လေးကို ငုံခဲပြီး အဖုတ်လေးထဲရောက်နေတဲ့ လက်ကို ထိုးမွှေလိုက်ချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး.. သမီးရဲ့ ပေါင်တွေဟာ တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး ဦးဦးရဲ့ မျက်နှာကို သမီးရဲ့ ချစ်ရည်ကြည့်တွေနဲ့ ပန်းလိုက်မိပါတော့တယ်…. ဒါတောင် ဦးဦးရဲ့လျှာကြီးက သမီးကို အနမ်းသစ်တွေ ပေးနေသေးတယ်… နမ်းနေရင်းနဲ့ သမီးရဲ့ လက်ကလေးကို လှမ်းဆွဲယူပြီး သူ့ပုဆိုးအောက်က ထောင်ထနေတဲ ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးပေါ်ကို အသာတင်ပေးလိုက်တာ… မာန်တက်နေတဲ့ ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးဟာ. တုန်ခါပူနွေးနေပြီး သမီးရဲ့ လက်ထဲမှာ မဆန့် မပြဲနဲ့ တင်းတင်းကြီး ရှိနေပါတယ်… ပုဆိုးခံနေလို့ ကိုင်ရတာ အားမရပေးမယ့် သမီက စလို့ အရှက်မဲ့စွာနဲ့ မတောင်းဆိုရဲခဲ့ပါဘူး… ဦးဦးလဲ သမီးကို ယှက်ပေးရတာ မောသွားလို့ထင်တယ်.. သမီးရဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ တချိန်လုံးလိုလိုမြုတ်နေတဲ့ ခေါင်းကြီးကို မော့ပြီး အသက်ကို လှရူနေပါတယ်.. ခနကြာတော့ သမီးဘေးမှာ အသာဝင်အိပ်ရင်း..။
“ငယ်ငယ်. သမီး.. ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဘူးနော်… သမီးက မီးမီးနဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုပေမယ့် ထွားလွန်းတယ်ကွယ်. အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်ဘဲ…” “သမီးကတိပေးပါတယ်. ဦးဦးရယ်. ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောပါဘူး..” ဦးဦးရဲ့ မျက်နှာကြီးက ထပ်ပြီး ပြုံးသွားပြန်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ ထည့်ထားပြီး.. သမီးရဲ့ ဆံပင်လေးတွေကို အသာ ပွတ်ပေးရင်း သမီးရဲ့ နို့လုံးလုံးလေးတွေကို အကျီင်္ပေါ်ကနေ ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေလိုက်တာ… သမီးစိတ်တွေဟာ တကျော့ပြန်ထလာပါတော့တယ်… ဒီတစ်ခါတော့ သမီး စိတ်မထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ.. ပူနွေးပြီး မာတောင့်နေတဲ့ လက်ထဲက ဦးဦးလီးကြီးကို အရမ်းကြည့်ချင်လာလို့.. သမီးမျက်နှာကို ဦးဦးရင်ခွင်နဲ့ ဖွတ်ထားရင်း…. “သမီးကြည့်ချင်လိုက်တာ. ဦးဦးရယ်” လို့ တိုးတိုးလေးပြောရင်း ယောင်ပြီး ညှစ်လိုက်မိပါတယ်…“သမီးကြည့်ချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လှန်ကြည့်လေ.” ပြောတာနဲ့ လွတ်နေတဲ လက်တဖတ်နဲ့ ဦးဦးရဲ့ ပုဆိုးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ခါးထိအောင် မတင်လိုက်မိပါတယ်…. သမီးဘ၀မှာ ပထမဆုံး မြင်ရတဲ့ လီးကြီးဟာ. အချောင်းကြီးက မဲနက်နေပြီး ထိပ်ဖူးကြီးက ပွင့်အာကားထွက်နေကာ နီးညှိရောင်သန်းလို့နေပါတယ်… လမွှေးများက မဲနေပြီး ကွေးကောက်ခါ အချင်းချင်း လိမ်ယှက်နေကြပါတယ်.. သမီးလဲ ငယ့်ငယ့် စာအုပ်ထဲက လီးပုံစံ တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည်မိတယ်လေ… အသက်ဝင်ပြီ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ စါအုပ်ထဲက လီးကြီး.. တခြားစီပါဘဲ… ဦးဦးက သူ့လက်ကြီးနဲ့ သမီးလက်ကလေးကို ကိုင်ကာ သူ့လီးကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်နည်းသင်ပေးပါတယ်.. သမီးလဲ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးကို ဒစ်ပေါ်သွားအောင် ဆွဲချလိုက်. ထိပ်ဖူးကြီးမှာ အရည်ခွံတွေ စုပုံသွားအောင် ဆွဲတင်လိုက်.. ဒစ်ကြီးကို လက်ညိုးနဲ့ လက်မကြား ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့ လုပ်တက်သလို လျှောက်လုပ်ပေးနေမိတယ်… ဦးဦးရဲ့ ဒစ်ကြီးကို သမီးနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေနဲ့ ငုံပေးချင်ပေမယ့် စိတ်က အဲဒီလောက် မရဲသေးပါဘူး.. နဲနဲကြာတော့ ဦးဦးဆီက ညည်းသံတိုးတိုးလေး ထွက်လာပြီး အသာပွတ်ပေးနေတဲ့ သမီးရဲ့ နို့လေးတွေကို ဖိဖိပြီး ဆုပ်နယ်ပွတ်ချေနေပါတောတယ်… “အား…. သမီးရေ.. ဦးပြီးတော့မယ်.. တင်းတင်းလေး ဆုပ်ကိုင်ပြီး မြန်မြန်လေး လုပ်လိုက်ပါ…” လို့ပြောတာနဲ့ သမီးလဲ အရှိန်မြှင့်ပြီး ဦးရဲ့ လီးကြီးကို အထက်အောက် မြန်မြန်ကစေားပေးလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ …… ဦးဦးရဲ့ လီးထိပ်ကြီးက အရည်ဖြူဖြူ ပျစ်ပျစ်တွေ ပန်းထွက်လာပါတယ်…။
“ကောင်းလိုက်တာ. သမီး ငယ်ငယ်ရယ်… ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်… ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ ပြန်မပြောနဲ့နော်…” “စိတ်ချပါ. ဦးဦးရဲ့… သမီးလဲ ဘယ်သူ့ကို ပြောလို ဖြစ်ပါ့မလဲ.. သမီးနားလည်ပါတယ်…. သမီးတို့ ထပ်တွေ့ကြအုံးမှာလား. ဟင်…” “လိမ္မာလိုက်တဲ့ ခလေးရယ်… ဦးသမီးကို အရမ်းချစ်သွားပြီကွယ်… ကဲ. ကဲ. မိးမီး မနိုးခင် အိမ်သာလေး ဘာလေးသွားလိုက်အုံး… နောက်တစ်ပါတ်ထဲ ကျတော့ တွေ့သေးတာပေါ့နော်..” “ဟွန့်… ဦးကလဲ တပါတ်တောင် စေါင့်ရမှာလား..” “ဒီကြားထဲ ဦးကြည့်စီစဉ်ပါအုံးမယ်.. သမီးရယ်… အဲဒီ အခါကျရင် ဦးခိုင်းတာ အကုန်လုပ်ပေးရမယ်နော်…” “ဟုတ်.. ဒါဆို သမီး ရေချိုးခန်းထဲ သွားတော့မယ်နော်..” လို့ပြောပြီး ဦးဦးရင်ခွင်ထဲမှ ထလိုက်ပါတယ်… “သမီး.. ခဏနေဦး” လို့ပြောပြီး လက်ကိုလှမ်းဆွဲကာသမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို သူ့နှုပ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ ဖိနမ်းနေပါသေးတယ်… ပြီးမှ သမီကို မလွတ်ချင် လွတ်ချင်နဲ့ လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်.. အဲဒီနေ့ကစပြီး . မီးမီးတို့အိမ်မှာ သမီး တနေကုန်တော့တာပါဘဲ.. ဒါပေမယ့်လဲ လူက မလစ်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး.. ၅ရက်လောက်ကြာတော့ ဦးဦးက တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသွားတာကတော့ “သမီး မနက်ဖြန် ကျောင်းသွားမယ်ဆိုပြီး ဒီဖက်အိမ်ကူးလာခဲ့.. မီးမီးတို့ ခရီးထွက်ကြလိမ့်မယ်”. ဆိုပြီး ချက်ချင်းဘဲ သမီးနားက ထွက်သွားပါတယ်.. သမီးလဲ ရင်တွေ တော်တော် ခုန်ပြီး ကျန်ခဲ့တာပေါ့ရှင်… ဒီလိုနေ့ကိ မျှော်နေတာ ကြာခဲ့ပါပြီ… မီးမီးကတောင် လိုက်ခဲ့ဖို့ အတင်းခေါ်နေတာ ငြင်းပြီး အိမ်ကို တန်းပြန်လာခဲ့မိပါတယ်.. အိမ်ရောက်တာနဲ့ အခန်းတံခါးဂျက်ချပြီး.. အိမ်ယာပေါ်လှဲရင်း မနက်ဖြန်ကြုံရမယ့် အတွေ့အကြုံအတွက် စိတ်မှန်းနဲ့ တွေးရင်း ရင်တွေအရမ်းခုန်နေမိပါတယ်… “ဒီတစ်ခါတွေ့ရင် ဦးဦး သူ့လီးကြီးနဲ့ ငါ့အဖုတ်လေးထဲကိုများ ထိုးထည့်ပြီး လုပ်မှာလား… အဲလိုလုပ်ရင် အဖုတ်သေးသေးလေးနဲ့ တော်ပါ့မလား.. အရမ်းများ နာမလား… ငါ့အဖုတ်လေးကို ယှက်ပေးရုံဘဲလား… ငါကော ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးကို နမ်းပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဘဲ. သူတောင် ငါ့အဖုတ်လေးကို နမ်းပေးသေးတာ…..” အဲလိုတွေ တွေးနေရင် သတိရမိတော့ သမီးရဲ့ စကယပ်ဟာ ဗိုက်ပေါ်ထိ လှန်တင်ရက်သားဖြစ်နေပြီး အကျီင်္ကျယ်သီးတွေ ပြုတ်နေတဲ့အပြင် ဘရာဇီယာတောင် ဘယ်နားလွင့်မှန်းမသိဘဲ… တကိုယ်လုံးလဲ နှုံးခွေနေပြီး မလှုပ်ချင်အောင် မောဟိုက်သွားခဲ့ပါပြီ… မနက်မိုးလင်းလာကတဲက ဦးဦးနဲ့ တွေ့ဘို့အရေး ရင်တွေအရမ်းခုန်ပြီး သမီးမှာ အရည်တွေလိုက်နေပါပြီ… အိမ်ကလူတွေ မရိပ်မိအောင် အောက်ခံဘောင်းဘီနဲ့ ဘရာဇီယာ အပိုကို လွယ်အိပ်ထဲ ထည့်ပြီး အပေါ်အကျီင်္ကို တထပ် ထပ်ဝတ်ထားလိုက်ပါတယ်… အတွေးတွေနဲ့ မနက်စာလဲ ကောင်းကောင်း မစါးနိုင်ဘဲ ဦးဦးနဲ့တွေ့ဘိုသာ စိတ်စောနေပါတော့တယ်..။
ဦးဦးအိမ်ထဲကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ၀င်သွားမိတော့ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး.. ဒါနဲ့ သမီးလဲ ဦးဦးတို့ အိမ်ခန်းဆီကို ခြေသံ ဖွဖွနင်းပြီး တက်ခဲ့ပါတယ.. ရေချိုးခန်းထဲက ရေသံကြားရလို့ အသာကပ်သွားပြီး… “ဦးဦးလား… သမီးရောက်နေပြီ…” “အေး. သမီးလေး.. ဦးဦးရေချိုးနေလို့ ခဏစေါင့်ဦး… အခန်းထဲမှာဘဲနေ. ပြတင်းပေါက်နား မသွားနဲ့…” “ဟုတ်… ဦးဦး.. သမီး ဒီကဘဲ စေါင့်နေပါ့မယ်..” လို့ ပြောပြီး ထိုင်စရာ ကြည့်လိုက်တော့ တခန်းလုံးမှာ ၂ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီးတလုံးသာ. တွေ့တာနဲ့ ကုတင်ပေါ်တက်ထိုင်နေလိုက်ရင်း.. စဉ်းစား မိလိုက်တာကတော့.. “အင်း.. ဦးဦးနဲ့ အန်တီ.. ဒီကုတင်ကြီးပေါ်မှာ အကြိမ်ပေါင်း မရည်မတွက်နိုင်အောင် လိုးခဲ့ကြမှာဘဲ… အန်တီကတော့ ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး.. သမီကတော့ ရင်တွေခုန်လိုက်တာ… အန်တီအဖုတ်ကြီးကိုလဲ ဦးဦးယှက်ပေးမှာပါဘဲ… ဦးဦးကိုကော အန်တီ ပြန်စုပ်ပေးလား မသိဘူး….” အတွေးမဆုံးခင်မှာဘဲ… ဦးဦးဟာ. ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပါတော့တယ်.. တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရေတွေရွဲလို့ အောက်ပိုင်းမှာလဲ မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးသာ ပတ်ထားပါတယ်…. “ရော့. သမီး.. အကျီင်္တွေ ချွတ်လိုက်ပြီး ဒီမျက်နှာသုတ်ပဝါလေးဘဲ ပတ်ထား. အ၀တ်အစါးတွေ ကြေကုန်မယ်” ပြောပြီး သဘက်တစ်ထည်လှမ်းပေးကာ.. သူ့ဘာသာသူ ရေတွေခြောက်အောင် သုတ်နေပါတယ်.. ပထမတော့ သမီလဲ သူ့ရှေ့မှာ အ၀တ်တွေ ချွတ်ရမှာ ရှက်တာပေါ့… သူ့မိန်းမကြီးလို အတွေ့အကြုံတွေ အနှစ်၂၀လောက်ရှိတဲ့ သူနဲ့များ လာနှိုင်းနေလား မသိဘူး… လို့… ဒါပေမယ့်လဲ… ကိုယ်တိုင်က အရည်လိုက်နေတော့.. ကြာကြာမရှက်နေတော့ပါဘူး.. “ဦး ဟိုဘက် ခဏလည့်ပေးလေ.. သမီး အကျီင်္လဲမလို့” “အေး. အေး..” လို့ပြောပြီး တဖက်ကို လှည့်သွားပါတယ်.. သမီးလဲ အကျီင်္နဲ့ စကပ်ကို အမြန်ချွတ်.. မျက်နှာ သုတ်ပုဝါကို ရင်လျှားလိုက်ပြီး ဦးကိုကြည့်လိုက်တော့ သမီးကို ကျောပေးပြီးေ၇တွေသုတ်နေတုန်းပါဘဲ.. ဦးနောက်ကျောမှာ ရေတွေရှိနေသေးတာတွေ့တာနဲ့…. “ဦး.. သမီးကို ပေး. ဦးနောက်ကျောတွေ သုတ်ပေးမယ်. လို့ပြောရင်း ဦးဆီက မျက်နှာသုတ်ပဝါယူပြီး ဖွဖွလေး သုတ်ပေးနေတုန်းမှာဘဲ သမီးရင်တွေ အရမ်းခုန်လာပြီး စိတ်တွေလဲ အရမ်းလှုပ်ရှားလာကာ သမီးရဲ့ ပါးနဲ့ ဦးရဲ့ကျောပြင်ကြီးကို ကပ်ခါ နောက်ကနေ သိုင်းဖက်လိုက်မိပါတယ်… မာတောင်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ သမီးရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာ ဦးဦးရဲ့ ကျောပြင်ကြီးနဲ့ ကပ်ခါ တင်းနေတဲ့ သမီးရဲ့ နို့အုံလုံးလုံးလေးတွေ အတွင်းကို မြုတ်ဝင်တဲ့ အထိ ဖက်ထားမိပါတယ်… ဘယ်လောက်တောင်ကြာအောင် ဖက်ထားမိလဲ မသိဘူး… ဦးဦး သမီးကို လှည့်ပြီး ဖက်လိုက်တော့မှ အသိတွေပြန်ဝင်လာပါတယ်… တတန်းထဲ ဖြစ်နေတဲ့ သမီးရဲ့ နဖူးကို ဖွဖွလေး နမ်းပြီး ရင်ခွင်ထဲကို အတင်းဆွဲသွင်းထားတာ သမီးအရိုးတွေတောင် ကျိုးကုန်မလား ထင်မိပါတယ်.. တချိန်ထဲမှာဘဲ မာတောင်နေပြီဦးဦးရဲ့ လီးကြီးဟာ. သမီးရဲ့ဗိုက်ကို မျက်နှာသုတ်ပဝါအောက်က အတင်းလာထောက်နေပါတယ်… “သမီး အိပ်ယာပေါ်သွားရအောင်” လို့ပြောပြီး သမီးကို ဆက်ကနဲ့ ကောက်ပွေလိုက်ပါတယ်..။
သမီးလဲ ဦးရဲ့ လည့်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ် ပါသွားတော့တာဘဲ.. သမီကို ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ချထားပြီး သမးဘေးမှာ လှဲရင်း သမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေးတစုံကို အနမ်းရှည်ကြီး တစ်ခု စပေးပါတယ်… အသက်ရှုချိန်တောင် မရလောက်အောင်ပါဘဲ.. ပြီးတော့ ဦးဦးရဲ့ လက်တဖက်က သမီးရဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို ခုပ်နယ်ချေမွရင်း.. သမီးကိုယ်မှာပတ်ထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပဝါကို ဖြည်ကျလိုက်ပါတယ်.. သမီးရဲ့ နှုပ်ခမ်းတွေက တဆင့် ဖြူဖွေးတင်းမာပြီး လုံးဝန်းနေတဲ့ နို့လေးတွေရော. နီရဲထောင်ထနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုပါ ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ဆန့်သလောက် ငုံခဲထားပြိး လက်ကတော့ ဆီးခံပေါ်က အမွေးလေးတွေကိ ပွတ်သတ်ရင်းကနေ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးဆီ ဦးတည်ရွေ့လျားလို့နေပါတယ်… သမီးရဲ့ အရသာဖူးလေးနဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို စမ်းလိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာတော့ သမီးနှုတ်ခမ်းက ညည်းသံလေးနဲ့အတူ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးက ချစ်ရည်ကြည့်များလဲ တစိမ့်စိမ့် ထပ်ထွက်လာပါတော့တယ်… ဦးရဲ့လက်ဟာ ချစ်ရည်ကြည်များနဲ့ စိုစွတ်နေတဲ့ သမီးရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးထဲကို အဆုံးထိ ထည့်ပြီး သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေရင်း နို့အုံလေးကို ဘယ်ညာ ပျောင်းစို့နေပြန်ပါတယ်.. သမီလဲ ဘယ်လိုမှ ခံစားနိင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး.ရှင်.. ဦးရဲ့ ကျောကုန်းကြီးကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားပြီး သမီးရဲ့ နို့တော့.. ဖင်တွေကို ကော့ကော့ပေးနေမိပါတယ်… “ဦးရယ်.. ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ..သမီးမနေတက်တော့ဘူး…” လို့ တိုးတိုးလေး ညည်းမိတယ်ဆိုရင်ဘဲ ဦးဟာ သမီးကိုပေါ်တက်လာပြီး သူ့အောက်ပိုင်းကြီးကတော့ သမိးပေါင်ကြားမှာ နေရာယူက သမီးအခေါင်းထဲက လက်ကို ထုတ်လိုက်ပြီး အဖုတ်ဝကို မာတောင် ပူနွေးနေတဲ့ ဦးလီးကြီးနဲ့ တေ့လိုက်ပါတယ်.. “ဦး… နာမှာလားဟင်.. သမီးကြောက်တယ်…” “မနာပါဘူး သမီးရယ်.. နာရင် မိန်းမတွေ ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ဘယ်အိပ်ပါ့မလဲ.. နဲနဲနာလဲ ခဏပါကွယ်” လို့ပြောရင်း သူ့ရဲ့ မာတောင်နေတဲ့ လီးထိပ်ကြီးနဲ့ သမီးရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် စုံချည်ဆန်ချည် ပွတ်ပေးနေပါတယ်… ဦးဦးရဲ့ လီကြီးနဲ့ အဆုန်အဆန်ပွတ်ပေးလိုက်တာ.. အဖုတ်လေးထဲက အရည်တွေ အရမ်းစိမ့်ထွက်လားပြီး ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကာ အဖုတ်နှုပ်ခမ်းတွေ တင်းလာပါတယ်… ဦးဦးက သမီးရဲ့ ပေါင်၂ချောင်းကို ဆွဲထောင်ပြီး ရင်ဘက်နားထိတွင်းတင်က ဘေး၂ဖက်ကို ဖြဲချလိုက်ပြီး သမီးရဲ့ အဖုတ်လေးကို သူ့လီးကြီးနဲ့ တေ့ကာ အသက်ငယ်ငယ် အပျိပေါက်မလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးတည်းအလှကို ကြည့်ပြီး မျက်စေ့ အရသာခံနေပါတယ်… သမီးလဲ ဦးရဲ့ လီးကြီး သမီးအဖုတ်လေးထဲ ၀င်လာတေ့တာမှာ.. ကြောက်စိတ်ကော.. ရှက်စိတ်နဲ့ ခံချင်တဲ့စိတ်ကောပေါင်းကာ ရင်တွေ အရမ်းခုန်နေပါတော့တယ်…။
ဦးဦးက တကိုယ်လုံးကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေလို့ ရှက်ပြီး မျက်နှာကို လက်နဲ့ အုပ်ထားမိပါတယ်… မျက်နှာကိုသာ အုပ်ထားမိတာ.. အလိုးခံရတော့မယ့် သမီးရဲ့ အပျိုစင်အဖုတ်နုနုလေးကိုတော့ မကာလိုက်မိပါဘူး.. ဦးဦးဟာ သူ့လီထိပ်ကြီးနဲ့ သမီးရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက်ပွတ်ပေးနေရင်းက သမီးရဲ့ စေါက်ခေါင်းတည့်တည့်မှာ ခဏရပ်ထားပြီး အပြီးတိုင် နယ်မြေသိမ်းစစ်ပွဲ ဆင်နွဲတော့မယ့် ဟန်နဲ့ အရှိန်ယူနေပါတယ်… ခနနေတော့ သမီးရဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ တင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး ဦးဦးရဲ့ ဒစ်ကြီးဟာ အခေါင်းထဲကို တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးဝင်လို့နေပါတယ်… တကယ်တန်း ဒစ်ကြီးဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ အရမ်းမနာလှဘူး ဆိုပေမယ့် လွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး.. သမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ.. မဟတဟနဲ့ တဆတ်ဆတ်တုန်နေကာ မျက်လုံများ ပြူးထွက်ပြီး မျက်ရည်လေးများတောင် လည်လာအောင် ခံစားလိုက်ရတာပါ.. ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ ကိုယ်မို့ ဖြစ်သမျှ အံကြိတ်ခံယုံကလွဲလို့ သမီးမှာ ရွေးစရာ မရှိတော့မယ့် အတူတူ အိပ်ယာခင်းကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ တင်းနေအောင် ဆုပ်ထားလိုက်ရပါတယ်… ခဏနေတော့ တိုးဝင်လာတဲ့ ဦးဦးဒစ်ကြီး ရပ်သွားပါတယ်.. “ဦးဦး အဆုံးထိဝင်သွားပြီးလား.. ဟင်..” လို့အံကြိတ်ထားရင်း လေသံသဲ့သဲ့နဲ့ မေးလိုက်တော့….” “အင်း… သမီး အဆုံးထိဝင်သွားပြီ.. ခံနိုင်ရဲ့လား… ဒီထက်နာစရာ မရှိတော့ပါဘူး. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရမ်းကောင်းလာလိမ့်မယ်.” သမီးတော်တော်ပျော်သွားမိပါတယ်… ထပ်မနာတော့ဘူးဆိုတော့… “ခံတော့ ခံနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဖြေးဖြေးဘဲ လုပ်နော်….” သမီးစိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပါဘဲ.. ချစ်ရည်ကြည့်တွေကလဲ အခေါင်းထဲတင်မကဘဲ ဖင်ကြားထိအောင် စီးကျလို့နေပါပြီ… ဦးဦးရဲ့ ဒစ်ကြီးဟာ အခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိ စေါက်ခေါင်းထဲ ဆွဲသွင်းလာပြီး ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေဟာ ဒစ်ကြီးနဲ့အတူ အပြင်ဖက်ကို လန်ထွက်နေပါတယ်.. အချက်ပေါ်တော်တော်များလာတဲ့အခါမှာသမီးစိတ်ထဲ တော်တော် ခံရခက်လာပြီး သေးပေါက်ချင်သလိုဖြစ်လာလို့ ထိမ်းကြည့်ပါသေးတယ်.. မရတဲ့ အဆုံး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး စိတ်လျှော့လိုက်တော့ အရည် မပြစ်မကျလေးတွေ အများကြီးထွက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်… သမီးခံစားနေရတာကို ဦးဦးလဲ သိတယ်ထင်တယ်. သမီးကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားပြီး လီးကြီးရဲ့ အ၀င်အထွက်ဟာ ပိုမြန်လာစဉ်မှာဘဲ သမီးစေါက်ခေါင်းထဲကို ဆက်ကနဲ့ အဆုံးထိသွင်းချလိုက်ပါတော့တယ်…။
သမီးရဲ့ စေါက်ခေါင်းထဲမှာ စစ်ကနဲဖြစ်သွားပြိး ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးဟာ… စေါက်ခေါင်းတခုလုံးပြည့်ကြပ်ပြီး သမီးရင်ခေါင်းထဲထိရောက်လာသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်…. သမီးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဘဲ ဦးဦးဟာ အဆုံးထိသွင်းလိုက်ပြီး တစ်ချက်ချင်း နင့်နေအောင် ဆောင့်ချလိုက်တာ.. ၁၀ ချက်လောက် စေါင့်အပြီမှာ… ခံနိုင်ရည့်ရှိသွားပါတယ်… တခါပြီးသွားတဲ့ သမီးလဲ အခုမှ တကယ်အဆုံးထိစေါင့်ထည့်တာ ခံရတာမို့ ခံစားမှုတွေ ပြန်တက်လာပြီး လက်တွေဟာ ဦးဦးရဲ့ တင်ပါးပေါ်ရွေ့သွားပြီး အတင်းကုတ်ဆွဲထားမိပါတယ်… သမီးရဲ့ ဖင်ကြီးဟာလဲ ဦးဦး အားနဲ့ အင်နဲ့ ဆောင့်ချလိုက်မယ့် အချိန်ကို မှန်းမှန်းပြီး ကော့ကော့ပေးနေမိပါတယ်… ခဏကြာမှာတေ့ သမီးရဲ့ ပေါင်ရင်းတွေပါ တဆတ်ဆတ်တုန်လာအောင် ခံစားနေရပါပြီ.. ဦးဦးကို ပိုတိုးလို့ ဖက်ထားမိသလို သမီးရဲ့ ပေါင်ကိုလဲ အစွမ်းကုန် ကားထားပေးနေမပါတယ်… ဆောင့်ချလိုက်တိုင်းမှာ ဦးဦးရဲ့ ဆီးခုံရိုးနဲ့ သမီးရဲ့ ဆီးခုံ ဖေါင်းဖေါင်းလေးတွေရဲ့ ထိချက်ဟာ တသက်မမေ့နိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ… နောက်ထပ် ၁၅ ချက်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ သမီးရဲ့ စေါက်ခေါင်းထဲကို ပူနွေးတဲ့ အရည်တွေ အတင်းတိုးဝင်လာတာနဲ့အတူ သမီးရဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပါ တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး သမီးရဲ့ အဖုတ်လေးထဲက အရည်တွေတလဟော ကျလာပါတော့တယ်… ဦးဦးဟာ သမီးဗိုက်ပေါ်က မဆင်းသေးသလို သူ့လီးကြီးကိုလဲ သမီးအဖုတ်လေးထဲက ဆွဲမထုတ်သေးဘဲ လက်ကျန်အရည်လေးတွေကို တစက်ချင်း ညှစ်ထုတ်နေပါတယ်.. သမိးလဲ အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး သမီးရဲ့ စေါက်ခေါင်းလေးကို ၄-၅ ခါလောက် ညှစ်ပေးလိုမှာဘဲ အကုန်ထွက်သွားပါတော့တယ်.. ဦးဦး သမီးပေါ်က ထလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ဦးဦးရဲ့ လီကြီးဟာ သမီးအဖုတ်လေးထဲကျွတ်ထွက်သွားပြီး သမီးရဲ့ အခေါင်းလေးထဲက ဦးဦးရဲ့ အရည်တွေကော. သမီးရဲ့အရည်တွေပါ တစိမ့်စိမ့် စီးကျနေပါတော့တယ်… “ဦးဦး သမီးသွေးတွေထွက်လားဟင်..” “ဘာမှ မတွေ့မိပါဘူး သမီးရယ်.. သွေးက ထွက်တဲ့ လူမှ ထွက်တာပါ.. ရေသွာဆေးကြရအောင်…” ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းဆီကို တွဲခေါ်သွားပါတယ်.. ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ ကမုတ်ပေါ်မှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး သူတစ်ဝြကီး လိုးထားလို့ အရည်တွေ ပလပွဖြစ်နေတဲ့ သမီးရဲ့ အဖုတ်လေးကို သေသေချာချာဖြဲပြီး စိတ်ရည်လက်ရှက် ဆေးပေးနေပါတော့တယ်…။
သမီးကိုဆေးပေးပြိးတော့.. ‘ကဲ သမီး ထတော့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ သွာသုတ်ချေ. ဦးလဲ ဆေးလိုက်အုံးမယ်’ ဆိုပြီး သူ့လိးကြီးကို ဆေးဘို့ပြင်နေတော့ သမီးလဲ ထိုင်ရာက မထဲဘဲ ဦးလီးကြီးကို ဆွဲယူက ရေနဲ့ သေသေချာချာဆေးပြီး ဆပ်ပြာပါတိုက်ပေးရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးလိုက်မိတာ….. ခဏကြာတော့ ဦးလီးကြီး ပြန်မာလာပါတော့တယ်… ဦးဦးက.. ‘သမီး.. ထ.. ဒုတိယ ပိုင်း ဆက်ရအောက် လို့ပြောတော့’ သမီးလဲ အခုမှ ပထမဆုံး အလိုးခံရတာမို့ အဖုတ်ထဲမှာ နာနေလို့ နောက်တစ်ကြိမ်း မခံရဲသေးလို့ “ဒီနေ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဦးရယ်… သမီးအရမ်း နာနေလို့ပါ… လက်နဲ့ပြီးအောင် လုပ်ပေးမယ်နော်..” ဆိုပြီး ဆက်လုပ်ပေးနေမိပါတယ်… ဦးဦးလဲ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ သမီးလုပ်ပေးတာကို အရသာခံရင်း သမီးရဲ့ နို့လေးတွေကိုပါ လှမ်းကိုင်ကာ နယ်နေပါတော့တယ်… ရေဆေးပြီးကာစ တောက်ပြောင်နေတဲ့ ဦးရဲ့ လီးကြီးပေါ်က အရေပြားကို အဆုံးထိဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နီရဲပြဲလန်ပြီး ထိပ်ပွင့်နေတဲ့ ဒစ်ကြီးဟာ သမီးမျက်နှာလေးနဲ့ ၄ လက္မလောက်အလိုမှာ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်… သမီးလဲ အရမ်းလုပ်ချင်နေတာကို မလုပ်ရဖြစ်နေတဲ့ ဦးဦးကို သနားတာရယ်…. မျက်နှာနားမှာ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးရဲ့ လီးကြီးကို ကြည့်ပြီး အူးယားတာရယ်ပေါင်းလို့ ထွေထွေထူးထူး မစဉ်းစားနေတော့ဘဲ…. မြင်နေရတဲ့ ဦးဦးရဲ့ ဒစ်ကြီးကို ပါးစပ်လေးနဲ့ ကြိုးစားပြီး ဆန့်အောင် ငုံလိုက်ပါတယ်… ဦးဦးကို မော့ကြည့်တော့ ကြင်နာတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သမီးကို ကြည့်နေတာ သတက်မေ့လို့ရနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး… ဒစ်ကြီးပတ်ပတ်လည်ကို လျှာလေးနဲ့ လျှက်ပေးလိုက်… လီးကြီး တချောင်းလုံးကို အာခေါင်ထဲထိ ဆန့်သလောက် မျိုချလိုက်… တွဲကျနေတဲ့ ဥကြီး ၂ လုံးကို ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့ တော်တော် အလုပ်များသွားပါတယ်… နဲနဲကြာတော့ ဦးဦးလီးကြီးက အရမ်းမာလာပြီး.. “သမီးလေး.. ဦးဦး.သမီးပါးစပ်ထဲမှာဘဲ ပြီးလိုက်တော့မယ်နော်.. ဦးပြီးနေတုန်း အပြင်မထုတ်လိုက်နဲ့နော်..” လို့ ပြောတာနဲ့ ဦးလီးကို စုပ်ပေးနေရင်းနဲ့ဘဲ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်မိပါတယ်… သမိးပါးစပ်ထဲမှာ တဆတ်ဆတ်ခုန်လာပြီး ခဏအကြာမှာ သမီးပါးစပ်ထဲကို ပူနွေးနေတဲ့ ဦးရဲ့ သုတ်ရည်တွေ အဆက်မပြတ် ၀င်ရောက်လာပါတော့တယ်…..သမီးလဲ ဦးရဲ့သုတ်ရည်တွေ ပါးစပ်ထဲ ပြည့်လာလို့ ထွေးထုတ်ချင်ပေးမယ့် ဦးဦး အရမ်းကောင်းနေတုန်း သူ့လီးကြီးကိုပါးစပ်ထဲက ထုတ်ရမှာ သနားလို့ မထုတ်ဘဲ ငုံပေးထားတုန်း မနေတက်တော့တာနဲ့…. မထူးတော့တဲ့ အဆုံး… ဦးရဲ့ သုတ်ရည်တွေကို မျိုချလိုက်ရပါတော့တယ်…. ရှင်… ပြီးပါပြီ။